စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ အားပေးကူညီနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန် – NYDC
မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈။
အစိုးရက အစိုးရအလုပ်မလုပ်ဘဲ ဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာလဲ?
New Yangon Development Company လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီး စီးပွားရေး ဝင်လုပ်ဖို့လိုလား?
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက စီးပွားရေးအင်ပါယာ ထောင်မလို့လား?
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက New Yangon Development Company ထူထောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ခုနကမေးခွန်းတွေ မေးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းတွေဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ မေးလည်းမေးသင့်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် NYDC အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားလိုတာကတော့ NYDC သည် စီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်အတွက် လုပ်ကိုင်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ NYDC is not in business but in the business of promoting business လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ NYDC ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် မြို့သစ်တစ်ခု တည်ထောင်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရရှိလာအောင်၊ ဝင်ရောက်လာမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ စည်းစနစ်ကျစွာ ရပ်တည်နိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများလည်းရှိအောင် ဖန်တီးအထောက်အကူပြုဖို့ တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမှ NYDC ရဲ့ စီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ရန်ကုန်မြို့သစ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၂)သန်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ရေရှည်ရင်းနှီးဖို့ စဉ်းစားတဲ့နိုင်ငံပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် စွန့်စားမှုပိုယူဖို့ လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေ အချိန်အခါဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် NYDC အနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ရရှိရေးကို အဓိကဦးစားပေး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် NYDC အနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းသည် ခိုင်မာတဲ့၊ ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရှင်းလင်းဆွဲဆောင်သွားမှာ ဖြစ်သလို၊ တစ်ဖက်မှာလည်း နည်းစနစ်ကျကျ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းဘောင်တွေအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ပံ့ပိုးနိုင်မယ့် ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ စီးပွားရေးတွင်ကြယ်စေတဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေက လုပ်ပြသွားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အတုယူလို့ရမလား?
တရုတ်နိုင်ငံ Shenzhen မြို့ဟာ တစ်ချိန်က လူဦးရေး ၃၀၀၀၀ ဘဲရှိတဲ့ မြို့လေးပါ။ အခုချိန်မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ဝယ်လိုအားတွေကိုဖြည့်ပေးနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ ဖြစ်နေပါပြီ။ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Pudong ခရိုင်ဟာဆိုရင်လည်း အရင်က လယ်မြေတွေဘဲ ရှိရာကနေပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးနေရာ ဖြစ်နေပါပြီ။ စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ ဆိုရင်လည်း အင်မတန်ခေါင်ပြီး သယံဇာတ မရှိတဲ့နိုင်ငံကနေ စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အားထားရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါတွေက အစိုးရကနေ စီးပွားရေးအသွင် ဦးဆောင်လုပ်ပြီး အောင်မြင်သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း မျှော်မှန်းနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး နောင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ကလည်း ယခုအချိန်မှာ အကောင်အထည်ဖော် နေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တစ်ခု အလေးထားပြီး ပြောချင်တာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ လုပ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ အခြေခံ ကွာခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို ဆောက်လုပ်ဖို့ ရင်းနှီးငွေတို့၊ ဘဏ္ဍာငွေတို့ မရှိတာပါဘဲ။ ဒီအခြေအနေမှာ NYDC အတွက် နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ လိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို တည်ဆောက်ဖို့ ရှယ်ယာတန်ဖိုးရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ ( Equity Investors) ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကြီးကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးကြုံရမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါဘဲ။ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို တည်ထောင်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်မှုနည်းပြီး မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံ စီမံကိန်းတွေက အမှားတွေကို လေ့လာသင်ခန်းစာယူပြီး အမှားနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားရင်း နည်းလမ်းကျကျ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြုလုပ်သွားရင် မအောင်မြင်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အောင်မြင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဒီယုံကြည်မှုက လွယ်လွယ်ကူကူမျက်စိမှိတ်ပြီးပြောနေတဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ အနေအထားအပေါ် မူတည်ပြီး စစ်ဆေးတွက်ချက်မှုတွေကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဖြေတွေပေါ် အခြေခံပြီးမှ ရရှိလာတဲ့ ယုံကြည်မှုပါ။ ထွက်ပေါ်လာမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ရှိထားရမယ့် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံအချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ –
၁) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်တည်နိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေါပေါ်က်ဖို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို အားပေးကူညီထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မယ့် စီးပွားရေးမူဝါဒတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
၂) နည်းပညာများမျှဝေရေး နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်သားများကို အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်ရေး ကို စနစ်ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် မဟာဗျုဟာတစ်ခု တည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။
၃) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ဖို့ ခိုင်ခံ့တိကျတဲ့ ဥပဒေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တွေရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအပြင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး၊ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကင်းရှင်းရေး စတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအခြေခံအအချက်တွေကိုဖြည်စည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်း ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ် (၂)သန်းလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။